CHIPS Kubatana, mubatanidzwa wekusimudzira akavhurika machipisi uye SoC | Linux Vakapindwa muropa
CHIPS Kubatana, mubatanidzwa wekusimudzira akavhurika machipisi uye maSoCs
Munguva pfupi yapfuura pasi pejasi reLinux Foundation chirongwa chitsva chakaumbwa, CHIP Alliance "Zvakajairika Hardware yeInternet, Ma processor uye MaSystem"(Yakajairwa Hardware yeinopindirana, processor uye masisitimu), inoitirwa kusimudzira yakavhurika masystem ehurdware uye gadzira mhinduro dzinoenderana neyakavakirwa RISC-V.
Vakavamba izvi chirongwa chitsva "CHIP Alliance" iwo maGoogle, SiFive, Western Dhijitari uye Esperanto Technologies. CHIPS Mubatanidzwa wakafanirwa kuzvimisikidza pachako seyakarerekera uye yakazvimirira chikuva.
1 Chii chinonzi CHIP Mubatanidzwa?
Chii chinonzi CHIP Mubatanidzwa?
Iyi chikuva inobvumidza akasiyana siyana ekugadzira michina (Hardware) vanogona kuvandudza mapurojekiti avo pamwechete kuti vagadzire yakavhurika CPU kunze-kwe-kwe-bhokisi kuitiswa uye imwechete chip masisitimu (SoC) uchishandisa iyo RISC-V kuvaka.
RISC-V (inonzi "Njodzi-Shanu") yemahara Hardware-yakavakirwa kuraira seti yekuvaka (ISA) ine RISC-senge dhizaini. Kusiyana nemazhinji maseti ekuraira, RISC-V ndeye mahara uye yakavhurika uye inogona kushandiswa chero chinangwa.
Kubvumira chero munhu kugadzira, kugadzira uye kutengesa RISC-V machipisi uye software. Kunyangwe isiri yekutanga kuvhurwa dhizaini ISA, asi yakakosha nekuti yakagadzirirwa kuve inobatsira pazvinhu zvakasiyana siyana zvemidziyo.
Kunyange parizvino kurongwa kweRISC-V Foundation inobata chete neyakavakirwa kubva pamurairidzo wakaiswa, asi haina basa nemaitiro chaiwo.
Ndokusaka hwaro hutsva uhu hwakazvarwa uye basa reCHIPA Alliance ndeyekugadzirira yakajairwa yakavhurika chip dhizaini yemafoni nhare, makomputa masystem, vatengi zvemagetsi uye neInternet yezvinhu.
"Kuvhura kubatana kwakaratidzirwa kakawanda kubatsira maindasitiri kukurumidza nguva kumusika, kuzadzikisa kugadziriswa kwenguva refu, uye kugadzira de facto zviyero," akadaro Mike Dolan, mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zveLinux Foundation. "
Sechipo chako chekutanga, ivo vakatanga CHIP Alliance vakaburitsa zvinotevera zvirongwa zvekubatana.
Este iri 32-bit RISC-V processor inogadzirwa neWestern Digital. Chip inoshanda pahuwandu hwe1,8 GHz, Iyo yakavakirwa pane yekuvakisa ine 8-nhanho mbiri trunk mapaipi (2-nzira superscale) uye yakagadzirirwa kugadzirwa uchishandisa 28nm CMOS maitiro tekinoroji.
Schematics, zvinyorwa, CAD mamodheru, chip dhizaini, microcode, uye kuzadzikiswa kuzere mumutauro weVerilog zvakavhurika pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Es network protocol iyo inopa cache kuenderana kana uchinjisa dhata pamusoro peEthernet.
OmniXtend kuda inobvumidza iwe kuchinjana mameseji zvakananga ne processor cache uye inogona kushandiswa kubatanidza akasiyana ekuwedzera mahedhiyo, ekuchengetedza zvishandiso, ndangariro zvishandiso (NVDIMMs) uye network mapindiro kuSoC, pamwe nekugadzira masisitimu ane akawanda RISC-V machipisi. Chirongwa chakatamisirwa neWestern Dhijitari.
Google yaendesa kushandiswa kweUniversal Verification Methodology (UVM) yekunetseka kuyedza RISC-V komputa zvinhu uye dhizaini maturusi.
Kunyanya, isu tiri kutaura nezve inogadziriswa yekuraira kuyerera jenareta, iyo inogona kushandiswa kuona zvikanganiso uye zvipingaidzo padanho rekuvaka uye microarchitecture level.
The company SiFive, yakavambwa nevagadziri veRISC-V ivo vakagadzirira iyo yekutanga prototype yeprosesa yakavakirwa paRISC-V, pamusoro pekugadzira iyo nyowani yemhando yekutsanangura Hardware mutauro Chisel pamwe neUC Berkeley.
Tichaendesa RocketChip SoC jenareta kune iyo projekiti, kuburitswa kwekutanga kweiyo inowirirana TileLink interface yekubatanidza SoC zvikamu uye iyo Dhipatimendi fomati.
Sechikamu cheprojekti yekubatana, SiFive ichaendererawo mberi nekuvandudza mutauro weChisel uye mharidzo yepamberi yeFIRRTL.
Iye zvino, Zvichienderana neruzivo rweRISC-V, makambani akasiyana uye nharaunda dziri pasi pemarezinesi emahara akasiyana (BSD, MIT, Apache 2.0) vari kugadzira 21 dzakasiyana dzemicroprocessor cores:
10 SoCs uye 6 machipu atove kutengeswa (SiFive FE310-G000, SiFive Freedom U540, GreenWaves GAP 8, Kendryte K210, NXP RV32M1 uye RavenRV32).
Tsigiro yeRISC-V yanga iriko kubvira kuburitswa kweGlibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7, uye Linux kernel 4.15.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CHIPS Kubatana, mubatanidzwa wekusimudzira akavhurika machipisi uye maSoCs
Zvishandiso zvekugadzira zvekuita-zvinyorwa muLinux
ExTiX 19.3, iyo yekutanga kugovera neLinux Kernel 5.0 uye yakavakirwa paUbuntu 19.04